Indlu ekwanti yasemaphandleni engqongwe ngamaphandle
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJavier
UJavier ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
ICasa Las Heras yindlu yedolophu ethe yalungiswa yaphinda yadityaniswa phezulu kwinduli ekubonelela ngeembono ezintle.
Umgangatho ophantsi unamagumbi okulala ama-3: amagumbi amabini aphindwe kabini kunye ne-1 kabini, kunye negumbi lokuhlambela eli-2 eligcweleyo. Zonke zixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye zihonjiswe ngothando ukufezekisa ukuhlala okumnandi apho kukhululekile ukuba kwaye, ke, ukuphumla kuqinisekisiwe.
Kumgangatho ongaphezulu unokonwabela iimbono ezintle. Apho uya kufumana i-1 igumbi lokulala elinesithathu kunye negumbi lokuhlala elibanzi nelivulekileyo - igumbi lokutyela kunye nekhitshi (40 m2). Ikhitshi ihlukaniswe kwigumbi lokuhlala ngebar yamatye, uhlobo lweofisi. Uya kuba nakho ukulungiselela i-aperitif ngaphandle kokuphulukana neenkcukacha zento eyenzekayo nabanye abakhoyo. Kwigumbi lokuhlala unokuphumla ngokufudumala kwendawo yomlilo kunye nekona yokufunda, ekulungele ukuphumla.
Ikwanethasi enkulu, apho unokuma khona ukuze uthabathe umoya ngelixa ubukele umhlaba omangalisayo.
Ngaphandle kukho i-patio egayiweyo kunye neveranda ene-barbecue, i-sink enamanzi ahambayo kunye netafile enkulu yegadi enezitulo, ilungile ukuba isebenze njengendawo yokuhlangana kubo bonke abeza endlwini kwaye bayonwabele inkampani. Ukusuka apho unokufikelela kwindawo encinci yokusebenzela enemithi yendlu.
Indlu ipholile ehlotyeni kwaye ipholile ebusika. Ilungele iintsapho okanye amaqela afuna indawo ethe cwaka neyodwa, kuba iyi-100 m. ukusuka edolophini.
Inombolo yomthetho: 19012128115